ဟယ်လို–ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳ Pokkaloh! အဆိုပါအဖွဲ့သည်ဒီမှာင္ခြအရွယ်ရောက်ယိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်အချိန်အကြာဒီ XXX ခေါင်းစဉ်နှင့်ကျွန်တော်ဟာကအဆင်သင့်နှင့်ရရှိနိုင်ဖို့အားဖြင့်ကစားမှာလူတိုင်းအိမ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစပိုင်းတွင်ဖန်တီးဒီဂိမ်းအတွက်ပြန်ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈ နဲ့အလုပ်လုပ်ကြပြီသေချာစေရန်အစဉ်အဆက်ကတည်းကဒါကြောင့်အဆင်သင့်ဖွင့်လာတဲ့အတွက်လူတိုင်းအတွက်ကစားရန်။ ဒါဟာလာမယ့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်း၊သို့သော်ဤနောက်ဆုံးထုတ်ဝေသောနှင့်အချို့သောထြက္ရင္လည္းသို့မဟုတ်အဓိကအကြောင်းအရာချဲ့ထွင်၊ကျနော်တို့အဆင်သင့်လူတိုင်းအတွက်ကစားရန်!, အပေါ်၏ကိုယ်စားအဆိုပါအဖွဲ့မှာအစ္စလာမ်၊ငါချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများအားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှန်တကယ်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်သောအဖြစ်အများကြီးပျော်စရာကစားဒီခေါင်းစဉ်အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့။ ဟိုဝုဏ်၏ဒီယိုဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်လူတိုင်းအွန်လိုင်းကနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောညမ်းဂိမ်းကုန်ကျပါဘူးကြောင်းကိုသူတို့ကိုတစ်ဦးလက်မောင်းတစ်ဦးခြေထောက်။ အဘယ်ကြောင့်လုပ်ငါတို့သည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်င့်ဒီဂိမ်းလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်! သင်သည်တတ်နိုင်နေစဉ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ် microtransactions၊ဒါဟာလုံးဝသင်မှတက်နှင့်သင်တို့ခံစားသင့်ပါတယ်အဘယ်သူမျှမဖိအားသမျှပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်နိုင်။, ဆခက်ခဲတဲ့များမှာထွက်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်မျှော်လင့်ကြောင်းဒီဂိမ်းရောက်စေနိုင်ပါတယ်သင်အနည်းငယ်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း! ကောင်း၏ဖြစ်နိုင်မည်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းသင်ရုတ်သိမ်းပေးရန်တစ်ဦး၏ထွက်မြိုင်၊မှန်သော? ဒါကဘယ်လိုအကြောင်းစဉ်းစားရာမှာင္ခြအရွယ်ရောက်ယို! ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့ဆို? သင်ကြိုးစားရန်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးညမ်း။ ထိုအခါလက်ျာဘက်အတွက်!
သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းသက်အပေါ်အတော်လေးအဆင့်ကျွန်းချင်ပါလိမ့်မယ်ကိုတက်ဆောက်လုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ:အဆိုပါတစ်ခုလုံးကိုရည်ရွယ်ချက်များ၏ဒီဂိမ်းသင်တို့အဘို့အမင်းများအားလုံးယင်းအလာဖန်တီးတစ်ဦးအင်ပါယာကိုပင်ဘုရင်မအလိုကျတယ်လို့ဆိုခဲ့၏။ ဒါဟာမ၊ဒါပေမယ့်အတွက်ထားလျှင်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဲဒီၡမ်ားကျွန်းပန္လာေဖွဲ့အနေဖြင့်နာရီပတ်လည်မှာသင့်ရဲ့ကြက်။ သူတို့မည်မဟုတ်ဟန်ဆောင်ဖြစ်စေ–အဲဒီမိန္းကေလးအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူတွယ်ကပ်သင်တို့ကဲ့သို့အဘယ်သူနည်းဥပဒေများအရင္အေ!, ထိုကျွန်းကိုယ်တိုင်ကကျော်ရှိပါတယ် ၆၀၀ ကိုအပိုင်းပိုင်း၏အထူးခြားတည်နေရာအနုပညာေလာက၏အဆုံးကိုအသေးစိတ် ၂D ပတ်ဝန်းကျင်အစဉ်အဆက်ကဖန်တီး! သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်စူးစမ်းင္သတက်သောဒေသများသို့သင်တည်ဆောက်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာအဖြစ်လျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးပြီးအခန်းကဏ္ဍ၊အားလုံးနေစဉ်ဘဏ်ပိုက်ဆံတက်၊ကျော်ကြားမှု၊ဆွဲဆောင်နှင့်မိန်းမဆောင်အိတ်နှင့်တူ၏ငယ်မည်ကိုဘာမှမလုပ်အတွက်သူတို့အကြိုက်ဆုံးလေးကို။ အဆင်သင့်ဖြစ်သည်အများဆုံးအခြေစိုက်ကျွန်းပိုင်ရှင်များအားလုံးအချိန်? ထိုအခါရသင့်မြည်းအတွင်းကြောင့်ကလေး၊ဒီဂိမ်းသွားအောင်သင်ခွံမာ! ခံစားဖြည့်စွက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အတွင်း Pokkaloh။
ဂိမ်းအဖြစ်အသုံးမပြုဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ၊ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကုဒ်ကိုတော်တော်ထူးခြားတဲ့အပိုင်းဂိမ်းအင်ဂျင်ထိန်းချုပ်ခွင့်ပြု–မည်သူမဆိုမသက်ဆိုင်သည့်စက်သူတို့အပေါ်–အားကစား Pokkaloh။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆိုလိုတာကဒီအအတိအကျ? ကောင်းစွာ၊အခါဝန်တက်ဂိမ်း၊ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲပြီးလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ရန်လိုအပ်သည်သုတ်မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်ဂိမ်းအရည်အသွေးနှင့် framerate လျောက်ပတ်။ ဒီအလုပ္လုပ္ပါမှလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ဆဲနိုင်ပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမပါဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ ငရဲ၊သင်ပင်သုံးစွဲအဟောင်းမိုဘိုင်းဖုန်းသင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်–အလေးအနက်!, ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်စိန်ခေါ်ဖို့ရှာတွေ့သောမည်သူမဆိုလိုလက်တွေ့ကျကျသုံးမရလည်းကျွန်တော်တို့ညမ်းဂိမ်း။ ဤမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်သုံးနေတယ်ဘာပဲသင်အနိုင်ရှိသည်ဖို့အတော်လေးမကြာသေးမီထုတ်ဝေများ၊မြေခွေးများ၊ရှု၊အရှင်စွန်း၊သင့်လုံးဝအဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုသမျှသို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း။ အပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တွက်ချက်မှု၊ခန့်သာ ၁၃%ကစားသမားများ၏အတွေ့အကြုံမဆိုအလျှော့ချရေးအတွက်အရည်အသွေးအတူစလုပ်ဖို့၊ဒီတော့လုံလောက်သည်ဟုဆိုရန်ဤအလွန်အမင်းအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်ဂိမ်းမှရသွား–ကျနော်တို့သေချာအောင်ချင်သောအုပ်စုငယ်လူတွေကိုပျော်မွေ့နိုင်ကြသည်မိမိတို့!
မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကောင်းတဲ့ရှိသည်ဖို့တစ်ကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်း၏NPCs အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိင်? ကျနော်တို့သေချာပေါက်စဉ်းစားဒါကြောင့်၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည် Pokkaloh ရှိပါတယ်အချို့သောအမှုအရှိဆုံး NPCs အကွာအဝေးကိုဖြတ်၏ကွဲပြားခြားနားသော niches သောသင်ချစ်ရန်သွားကြသည်။ ကျနော်တို့ရရှိပါသည်ထွား MILFs၊အသနားခံတ္ေဆယ်ကျော်သက်နှင့်အကြား၌ရှိသမျှကို။ ငရဲရှိပါတယ်၊ပင်သုံး transsexuals အနှံ့ ၆၀+NPCs သင်ရှိသည်နိုင်လိင်တူယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်သင့်ရဲ့ကြက်! ပါကအားလုံး၏အ NPCs ဒီနေရာမှာလည်းလိုက်လျောညီထွေ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဦးစားပေး။, နေစဉ်ကရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သောသူတို့အားလုံးဟာဘယ်လိုဇာတ်ကောင်စရိုက်များကောက်ဂိမ်းအတွက်ရှိပါတယ်၊အချို့အလုပ်အများကြီးတစ်ငရဲလွယ်ကူမှချရနိုင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ သင်နိုင်မည်အချိန်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်အဖြေအၡမ်ားမေးခွန်းတွေကိုသေချာစေရန်လျင်မြန်စွာ၊ပူပြင်းလိင်? အကြောင်းတစ်ခုခုသင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ရှာဖွေထွက်အတွက်ကြောင့်အချိန်နှင့်ပိုင့်အဘယျသို့၊ဒါဟာ၏အစိတ်အပိုင်းဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ XXX ဂိမ်းခေါင်းစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးပတ်ပတ်လည်! သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်အခါသင်၏ဂိမ်း၊သင်ကြည့်ရှုသောအရာတစ်ခုခုရဲ့အမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့နှင့်အထူး။
လိင်ဆပ်ကပ်မှာ Pokkaloh ရိုးရိုးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်။ မည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရတဲ့အနေ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်တစ်ဦးညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို–နှင့်ပြည့်စုံ၍ဘုဥ္းကျော်ဖြစ်ပျက်နှင့်မည်သို့သင်ချင်မင်းအပေါင်းတို့သည်ကျွန်း၏အခမဲသင်ဖြတ်ပြီးလာ။ ကနေရွေးချယ် ၂၀ ကွဲပြားခြားနားသောရာထူး၊တစ််ပြီးအမြန်နှုန်း၊အတိမ်အနက်ဆိုင္ကယ္နှင့်ပင်ထိန်းချုပ်သင်၏လက်ကိုများမှာ။ သင် spank နှင့်ပိတ်ဆို့စဉ်မုန်တိုင်းအကွာကိုပယ်ရှားခြင်းနှင့်ကျွန်တော်ပင်ရှိသည်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအထူး cumshot ကင္မရာကကျွန်တော်တို့မမြင်အခြားဂိမ်းကစားအတူတက်လာ။, ချင်သောသေချာစေရန် Pokkaloh တစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဂိမ်းနှင့်ရည်ရွယ်များနှင့်အတူတက်လာမယ့်အကောင်းဆုံး XXX လိင် simulation လှည့်ပတ်ကိရိယာ–အရာတစ်ခုခုကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲပါဘူး။
ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? တက်လက်မှတ်ထိုးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဂိမ်းအခုအချိန်မှာကြည့်ရှုနိုင်လျှင်ရိုက်နှက်! စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ဂိမ်းကစားထံမှလူတိုင်းမှာအစ္စလာမ်–ရွှင်လန်း!